Ukuchongwa Kwegesi | Ulwazi malunga nenkampani Shanghai Sunshine Technologies Co., Ltd., izabelo zokutshintshana Shanghai Sunshine Technologies Co., Ltd.
Isinxibelelanisi segesi esingaSasazeki (i-NDIR) luhlobo lwesixhobo sokujonga igesi esisekwe kumgangatho ohlukeneyo weemolekyuli zerhasi yokufunxa okukhethiweyo kufutshane ne-infrared spectrum, kusetyenziswa ubudlelwane phakathi koxinzelelo lwegesi kunye nokufakwa ngamandla (iLambert-Beer Law) ukuchonga izinto zegesi noxinzelelo. Xa kuthelekiswa nezinye iintlobo zeesenzi zerhasi, ezinje ngohlobo lwe-electrochemical, uhlobo lwe-catalytic combustion kunye nohlobo lwe-semiconductor, ii-infrared infrared (NDIR) ze-sensors zegesi ezinezibonelelo zesicelo esibanzi, ubomi benkonzo ende, ubuntununtunu obuphezulu, uzinzo olungileyo, iindleko-ezisebenzayo, Iindleko zokugcina eziphantsi, uhlalutyo lwe-Intanethi njalo njalo. Isetyenziswe ngokubanzi kuhlalutyo lwegesi, ukhuselo lokusingqongileyo, isivusi sokuvuza, ukhuseleko kwimizi-mveliso, ezonyango kunye nezempilo, imveliso yezolimo kunye nezinye iinkalo.
Izibonelelo zenzwa yegesi ye-NDIR:
1.Anti-ityhefu, akukho dipozithi yekhabhoni. Xa inzwa ye-CAT ilinganisa ezinye iigesi, kulula ukuyifaka ikhabhoni ngenxa yokungonelanga kokutsha, okukhokelela ekwehliseni ubuntununtunu bemilinganiselo. Umthombo wokukhanya we-IR kunye ne-sensor zikhuselwe ngeglasi okanye ngesihluzi, kwaye ungaqhakamshelani negesi, ke akuyi kubakho mlilo.
2. Ayifuneki ioksijini. I-NDIR sisivamvo esibonakalayo kwaye ayifuni oksijini.
3. Uxinaniso lokulinganisa lunokufikelela kwi-100% v / v. Kuba iimpawu zesiginali ye-NDIR sensor zezi: xa kungekho gesi enokulinganiswa, ubukhulu besiginali sesona sikhulu, kwaye ukuphakama koxinaniso, kuncinci umqondiso. Ke ukulinganisa ukugxila okuphezulu kulula kunokulinganisa i-low concentrations.
4. Ukuzinza kwexesha elide kunye neendleko zokugcina eziphantsi. Ukuzinza kwe-NDIR sensor kuxhomekeke kumthombo wokukhanya. Logama nje umthombo wokukhanya ukhethiwe, kwaye unokusetyenziswa iminyaka emi-2 ngaphandle kokulinganiswa
5. Uluhlu lobushushu obubanzi. I-NDIR inokusetyenziswa kuluhlu lwama-40 ukuya kuma-85 ℃